1550 nm Er Erbium Girazi Fractional laser / fiber laser yekumeso kumutsiridza kuunyana kubvisa muchina
Kurapa dzidziso ye1550nm erbium girazi fiber laser ganda revanhu rakasunungurwa ne1mm gore rega kubva zera ramakore makumi maviri nemashanu. Ndiko kuti, ganda rinowanzo tarisa rakasununguka nezve 3.5cm pazera ramakore makumi matanhatu. uye muromo unoonekwa muchimiro chemakwenzi. Iyo 1550nm dot-matrix laser wrinkle remover ndeyekufadza pores akanaka pane akadaro akasununguka ganda (1cmX 1cm inogona kusvika kusvika 784 activation points) kuburikidza neakanaka pores ekuumba matishu matsva paganda, shrink iyo l ...
Ipl Opt Laser Bvudzi Kubvisa Muchina Permanent Bvudzi Kubvisa Runako Midziyo
Musimboti wekurapa Chizvarwa chitsva cheOPT mwenje chinogona kushanda paganda epidermis kuburitsa photolysis uye kukurudzira kwehupenyu kubvisa mhando dzese dzemavara mavara, mafirita eropa uye kubvisa bvudzi; iyo yepamusoro-frequency electromagnetic wave inogadzirwa neyakawandisa inogadzira yakakwira-mhanyisa kudedera pane mamorekuru emvura ema dermal maseru (huwandu hwakawanda hwe mamorekuru emvura, mamorekuru epolar uye maion akabhadhariswa) kuburikidza nepidermis, uye inogadzira kupisa simba kusvika pamadhigirii makumi mashanu- kuburikidza neyekumhanya-kumhanya rotat ...
Erbium Girazi Fractional Laser 1550nm Runako Midziyo Isiri-Ablative Makwenzi / Acne Mavanga Kubvisa Chiso Kusimudza
Kurapa dzidziso ye1550nm erbium girazi fiber laser Iyo isiri-inokanganisa Erbium girazi laser system ine wavelength ye1550nm. Iyo wavelength ye1550nm inoshandisa zvinyoro zvinopisa zvakadzika mukati meiyo derma kuburikidza nepidermis, kwavanotorwa nemvura iri munyama uye inotungamira kune kwakanyanya kupisa mukati memaviri. Iyo nyama inodziyirwa zvinyoro nyoro, uye inoguma kusagadzikana kwesero, nepo ganda pamusoro riri isina simba.Iyo laser's yakanyanya kupisa simba inosarudza inoparadza iyo sebaceous gl ...
Picosecond Laser Tattoo Kubvisa Muchina
Picosecond laser iyo yakagadzirirwa kubviswa kwakawanda-nyora nyora. Inogona kugona kumutsiridza ganda pamwe pasina nguva yekuzorora uye yese-yerudzi kubviswa kwetatoo, senge acne mavanga, zuva-rinokuvadza ganda. Kuunyana uye melisma nezvimwewo Unodemba here nyora yako? Wakaneta neyakaomarara zera mavara? Kutsvaga kutaridzika kwevechidiki? Uchishandisa matekinoroji azvino uno, iyo yazvino Picosecond laser, haina kumbobvira yave nyore uye nekukurumidza kubvisa mavara uye nyora dzisina kudikanwa. Nguruve uye nyora yekubvisa tekinoroji ine zvechokwadi ...
1,100% Germany yakatumira kunze kweLaser Stacks 2, safire chaiyo Crystal, yakanakisa kutonhodza conduction 3. 12 * 20mm hombe nzvimbo saizi, ine "IN-Motion" nzira yekurapa, inokurumidza kurapwa kurapa 4. 808nm katatu wavelength. achevinq yakanakira mhedzisiro yemhando dzese dzebvudzi nemhando dzese dzeganda Diode laser bvudzi rekubvisa tekinoroji kunoenderana nesarudzo yekuchinja kwechiedza uye kupisa. Iyo laser inopfuura nepaganda pamusoro kuti isvike pamudzi webvudzi follicle.Light inogona kutorwa uye kushandurwa kuita kupisa kwakakuvara hai ...
1060nm 4 Anobata Diode Laser Muviri Rakaumbwa Uremu Kurasikirwa Slimming Machine
1060nm diode laser body slimming muchina iri laser-based uye isiri-invasive kurapwa, iyo inozoshandiswa kunongedza uye kudzikisa kana kubvisa mafuta maseru zvakananga. Inoshanda kune vese varume nevakadzi uye pamhando dzakasiyana dzemuviri. Imwe nzira inotora avhareji yemaminetsi makumi maviri neshanu uye inogona kunongedza nzvimbo dzakawanda panguva imwechete. 1060nm diode laser system inotora isina-invasive muviri contouring hyperthermic tekinoroji, iyo inoshandisa 1060nm laser uye inonyanya kunangana neadipose tishu kudzikisa mafuta akaomarara mu ...